HD 41534 - ဝီကီပီးဒီးယား
06° 04′ 20.2657″
−32° 10′ 20.750″
ဗဟိုခွာအား အလျင် (Rv) 93 ±5km/s
သင့်လျော် ရွေ့လျားမှု (μ) RA: −15.62 mas/yr
Dec.: 120.75 mas/yr
ပြောင်းလဲ တည်နေရာ (π) 3.01 ± 0.57 mas
အကွာအဝေး approx. ၁၁၀၀ ly
(approx. ၃၃၀ pc)
ပကတိ အရွယ်အစား (MV) −2.0
အချင်းဝက် 3.90 R☉
လှည့်ပတ်အလျင် (v sin i) 128 km/s
72G. Col, CCDM J06043-3210AB, CD−32 2743, CPD−32 1008, FK5 2464, GC 7708, HIP 28756, HR 2149, IDS 06006-3210 AB, PPM 282235, SAO 196459.
HD 41534 သည် ကိုလမ်ဘာ ကြယ်စုတန်းရှိ ပင်မ အစီစဉ်အတွင်းရှိကြယ်ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာမြေမှ အလင်းနှစ် ၁၁၀၀ ကွာဝေးပြီး ကြယ်သည် ပုံမှန်မဟုတ်သော အမြန်နှုန်း တစ်စက္ကန့်လျင် ၁၉၀ ကီလိုမီတာဖြင့် ပြေးခုန်ပေါက်နေသောကြယ်ဖြစ်သည်။
↑ ၁.၀၀ ၁.၀၁ ၁.၀၂ ၁.၀၃ ၁.၀၄ ၁.၀၅ ၁.၀၆ ၁.၀၇ ၁.၀၈ ၁.၀၉ ၁.၁၀ CCDM J06043-3210AB -- Double or multiple star, database entry, SIMBAD. Accessed on line September 21, 2009.
↑ ၂.၀ ၂.၁ ၂.၂ HR 2149, database entry, The Bright Star Catalogue, 5th Revised Ed. (Preliminary Version), D. Hoffleit and W. H. Warren, Jr., CDS ID V/50. Accessed on line September 21, 2009.
↑ HD 41534, database entry, Catalog of Apparent Diameters and Absolute Radii of Stars (CADARS), 3rd edition, L. E. Pasinetti-Fracassini, L. Pastori, S. Covino, and A. Pozzi, CDS ID II/224. Accessed on line September 21, 2009.
↑ HD 41534 is Gould's 72nd of Columba in his Uranometria Argentina. (Gould, B. A., (2009) Uranometria Argentina, (Reprinted and updated by Pilcher, F.)Archived copy။ 2012-02-27 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2010-07-16 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။) Some astronomers wrongly called it as simply "72 Col".
↑ 72 Columbae,aB3V run-away star from the association I Scorpii, T. S. van Albada, Bulletin of the Astronomical Institutes of the Netherlands 15 (May 1961), pp. 301–305, Bibcode: 1961BAN....15..301V.
ဤ ပင်မအစီစဉ်အတွင်းရှိကြယ်နှင့် သက်ဆိုင်သော ဆောင်းပါးမှာ ဆောင်းပါးတို တစ်ပုဒ်ဖြစ်သည်။ ဖြည့်စွက်ရေးသားခြင်းဖြင့် မြန်မာဝီကီပီးဒီးယားကို ကူညီပါ။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=HD_41534&oldid=370844" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၁ ဇွန် ၂၀၁၇၊ ၀၂:၀၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။